‘लकडाउन’ कहिलेसम्म ? नेपालको तयारी कस्तो छ ? - Jukson.com
‘लकडाउन’ कहिलेसम्म ? नेपालको तयारी कस्तो छ ?
‘लकडाउन’ लम्बिदै गयो भने आम मजदुरले यसको सामना कसरी गर्लान ?
Jukson१४ चैत्र २०७६, शुक्रबार २२:२० मा प्रकाशित
उनले थपेका छन्, ‘मेरो आयस्रोत अब यही हप्तादेखि रोकिएको छ तर पनि म केही किन्न सक्ने हालतमा छैन ।’ अवोगको कारुणिक भनाइले विश्वका धनी वा गरीब सबै खालका देशमा रहेका आमगरीब मजदुरको यथार्थ अवस्थाको चित्रण गरेको छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्य भनेको कति समयको ‘लक–डाउन’पछि संक्रमण हल होला भन्ने कुनै पूर्वानुमान गर्न सकिने विषय होइन । उच्च संक्रमणको सामना गरिराखेका विभिन्न देशले यसको अवधि बढाउँदै लगेका छन् ।
‘सामाजिक दूरीको अवधि यो संक्रमणको जोखिम रहेसम्म जतिसक्दो बढाउनु नै यसबाट बच्ने अहिलेको मुख्य उपाय हो, यो केही महिनाहरू, वर्ष र त्योभन्दा बढी लम्बिन पनि सक्छ,’ द भक्सका लागि मार्च १७ मा ब्रियान रेस्नीकले तयार पारेको रिपोर्टमा वैज्ञानिकहरूको विचार उदृत गर्दै भनिएको छ, ‘यो भाइरसको विस्तार कहिलेसम्म रहन्छ ? यकिन गर्न नसकिने भएकाले सजगताको यही उपाय नै अहिलेको आधार हो । सो रिपोर्टमा अर्को गम्भीर कुरा पनि औंल्याइएको छ, अहिले इम्युनिटी पावर राम्रो भएर ठीक भएका बिरामीलाई पछि रि–इन्फेक्सन हुँदैन भन्ने शतप्रतिशत ग्यारेन्टी पनि छैन । किनकि यसको उपचारको निम्ति हालसम्म ठोस भ्याक्सिन पत्ता लागिसकेको छैन ।’
रिपोर्टमा ह्वाइट हाउसस्थित कारोना भाइरस नियन्त्रण टास्क फोर्सका सदस्य तथा डा. एन्थोनी फयुसी, लण्डन स्कूल अफ हाइजेनीका विज्ञ तथा इपिडिमियोलोजिस्ट एडम कुरास्की लगायतका विज्ञहरूको सुझावलाई उदृत गरिएको छ ।
रिपोर्टमा लेखक तथा डिजास्टर विज्ञ स्कट नोवेल्सले यो विपत्तिलाई सन् १९१८ मा देखिएको इन्फ्लुएन्जा पेन्डामिकसँग तुलना गर्दै फरक समय र फरक परिस्थितिमा उत्पन्न भएको उस्तै भाइरस भएको दाबी गरेका छन् । त्यतिबेला पनि केही शहर, विद्यालय र चर्चहरू बन्द गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
माथि उल्लेखित भावानुवाद गरिएका रिपोर्टलाई हेर्न हो भने अमेरिका, युरोप लगायतका जोखिमबाट ग्रसित देशहरूले विज्ञहरूकै सुझावका आधारमा ‘लकडाउन’को अवधि परिस्थितिको गाम्भीर्यतालाई हेरेर बढाउनेमा कुनै शंका छैन । इटली, स्पेन, जर्मन, फ्रान्स लगायतका देशले त अहिले बढाउँदै लगेको अवस्था नै छ । जोखिमको पूर्ण उन्मुलन भएको विश्वास्त आधार तयार नभएसम्म यस्ता देशले पूर्ण वा आंशिक ‘लक–डाउन’लाई लामो समयसम्मै निरन्तरता दिने आकलन गरिएको छ । स्रोतका अनुसार यस्ता देशहरू अहिले कम्तिमा ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म ‘लकडाउन’ गर्ने तयारीमा छन् । के साँच्चै आमसुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर नेपालले पनि यी देशहरूले अपनाएको विधि, जनतालाई सेवा प्रवाहमा गरेको तयारी उत्तिकै प्रभावकारी छ त ? अहिले उब्जिएको आशंका भनेको यही नै हो । सरकार भूकम्प र नाकाबन्दीको बेला जस्तै कमजोर तयारीमा लागेको छ वा त्यस्ता कमजोरीबाट पाठ सिकेर प्रभावकारी व्यवस्थापनमा लागेको छ ? सचेत हुनुपर्ने पाटो यही नै हो ।
किन अमेरिका, युरोप लामो ‘लकडाउन’को तयारी गरिराखेका छन् ? यो बुझ्न जरुरी छ । यसको मूलभूत कारण हो उनीहरू पनि चाइनिज मोडल नै अपनाएर यो महाविपत्तिबाट मुक्त हुन खोजिरहेका छन् । किनकि कोभिड १९ को इपिसेन्टर पनि चीन नै हो भने यो संक्रमणसँग धेरै मुकाबिला गर्दै अहिले तंग्रिने अवस्थामा पुगेको देश पनि चीन हो ।
रिपोर्टमा इन्फेक्सनको दर नाटकीय रुपमा घटेको भएपनि आफूहरू परीक्षणकै घडीमा रहेको अधिकारीहरूले बताएको उल्लेख गरिएको छ ।
अब चाइनाले ‘लकडाउन’ अगाडि गरेको तयारीको सानो प्रसङ्ग जोडौं । ‘शुरूमा वुहानमा ३ हप्ताको लक–डाउनको घोषणा गरिएको थियो, सबैका लागि विश्वका अरुलाई जस्तै यो नयां संकटको अनुभूत भएको थियो । तयारी गरिराख्दा मास्क र अत्यावश्यक औषधिको उत्पादनलाई तीब्रता दिइएको थियो, खाद्यन्नको कुनै अभाव हुँदैन भन्नेमा पूर्ण ग्यारेन्टी गरिएको थियो । पानी, सुप र तरकारीको समेत आवश्यक प्रबन्ध गरिसकिएको थियो । आम वुहानबासीलाई यसरी क्वारेन्टाइनमा राख्दा सायद केहीको व्यवस्थामा कमी थिएन, घरमा पालिएका जनावर र तिनका बच्चालाई समेत पर्याप्त आवश्यक सामग्रीको प्रबन्ध मिलाइएको थियो,’ अमेरिकाबाट प्रकाशित फरेन पोलिसी अनलाइन संस्करणका सम्पादक जेम्स पाल्मरको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको तथ्य थियो यो ।
यो विकराल अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ वा विश्वले कहिलेसम्म धान्नुपर्नेछ ? कसैले अनुमान गर्नसक्ने अवस्था छैन । जोखिम न्यूनीकरणका निम्ति विश्वले पछ्याएको ‘लकडाउन’ विधिलाई नेपालले पनि अपनाएको छ, यो साँच्चै नै प्रशंसनीय छ तर पनि अन्तिममा फेरि एक पटक जिज्ञासा सोध्न मन लाग्यो – नेपालको व्यवस्थापनको तयारी कस्तो छ, चीनको जस्तो कि फिलिपिन्सको जस्तो ?
#Lockdownwithoutplan corona virus covid19 nepal lockdown
नेपालमा चौथो व्यक्तिमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमण